शहर Volsk - होटल: ठेगाना, कोठा को वर्णन, मूल्य
60 हजार मान्छे को कुल जहाँ बस्नुहुन्छ साराटोभ क्षेत्र को सानो पर्याप्त टाउन, - Volsk। शहर को वोल्गा को सही बैंक मा स्थित छ, र यसैले एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य हो। मानिस मात्र मनोरञ्जनको लागि यहाँ आएको, तर व्यापार को लागि पनि, यो Volsk कुनै पनि सम्मेलन र त्यस्तै घटनाहरू आयोजित कुनै कम प्राय छ। र तपाईं पहिले नै अनौठो शहर मा आइपुगेको छ जो एक व्यक्ति के चासो थाहा? निस्सन्देह, यो मामला मा, तपाईं आवास फेला पर्दछ, र धेरै मानिसहरू त्यहाँ आधुनिक भित्री र आरामदायक वातावरण हुनेछ जहाँ एक ठाउँमा रहन चाहन्छु।
पर्यटक परिसर, जो Volsk शहर आए पनि जो रोक्न सक्नुहुन्छ हामी ध्यान यस लेखमा आज। जानकारी, समीक्षा र नम्बर कोष को विषय मा एक सानो स्पर्श, सम्पर्क सही ठेगाना थाहा: होटल, हामी सबैभन्दा ठूलो विस्तार छलफल हुनेछ। सुरु गरौं!
मानक देखि लक्जरी गर्न: यो मिनी-होटल छन् समावेश जो विभिन्न विभाग को एक नम्बर मा, आधुनिक होटल जटिल छ। पनि जटिल भित्र तपाईं एक आरामदायक क्याफे, एक सौना एक पल्ट भ्रमण र निःशुल्क पार्किङ क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिष्ठानबाट को प्रकार तपाईं सबै 10 कोठा भाडामा सकिन्छ, धेरै ठूलो निधि छैन। को कोठा को प्रत्येक क्षेत्र 18 45 वर्ग मीटर देखि दायरा। को कोठा मा तपाईं आरामदायक र मापन सोख लागि आवश्यक सबै पाउनुहुनेछ। पनि टिप्पण लायक सबै कोठा शवर, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन र उच्च गति वायरलेस इन्टरनेट संग उपग्रह टीवी, बाथरूम छ भन्ने छ।
सारांश र समीक्षा
सबै कोठा क्लासिक शैली मा सजाया ठाउँ हुन् र प्रत्येक अन्य धेरै समान छन्। यो जटिल कारहरुको लागि एक सिंक र एउटा सानो किराना पसल छ। यस होटल परियोजना बारे समीक्षा त्यहाँ सेवाको ठूलो स्तर, अझ वा कम आधुनिक भित्री र अनुकूल कर्मचारी हो भन्ने। प्रशासन पाहुनाहरूको प्रसन्न तुल्याउने सबभन्दा छोटो समय मा समस्या निर्णय गर्छ। पनि ठाउँमा पर्यटक इलाका गर्न निःशुल्क पहुँच आरामदायक बस्ने क्षेत्र, एक गेमिङ कन्सोल सोनी प्लेस्टेशन र अन्य सुविधाहरु छ भनेर याद गर्नुहोस्।
+7 (964) 993-74-44: एक होटल "टाइटन" (Volsk) Bolshevik (36th घर) को गाउँमा छ, र प्रशासकलाई सम्पर्क, तपाईं फोन नम्बर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, कोठा को मूल्य प्रति रात 700 rubles देखि फरक हुन्छ।
यो संस्थाले पनि जहाँ वातावरण राम्रो र सान्त्वना छ मिनी-होटल, एक प्रकारको छ। सबै कोठा आधुनिक भित्री र अतिथिहरूको लागि सुविधाहरु अधिकतम संग सुसज्जित छन्। होटल शहर को सुनको औंठी को केन्द्र नजिकै स्थित "अलेक्जेन्ड्रिया" (Volsk),, त्यसैले यसलाई सबैभन्दा भ्रमण को छ।
केही मिनेट होटल को कुनै पनि अतिथि बैंकहरू, क्याफेहरू र रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्न, सपिङ्ग सेन्टर को एक किसिम पुग्न सक्षम हुनेछ। साथै, जटिल को पैदल दूरी प्रशासन र नाटक थिएटर र संस्कृति प्रेमीहरूलाई लागि स्थानीय Lore काम को संग्रहालय छ।
कोठा रोचक सजावट र आरामदायक रहन को लागि आवश्यक सबै, साथै शौचालय र स्नान छ। साथै, प्रत्येक बाथरूम मा अतिथि व्यक्तिगत हेरविचार उत्पादन, र बाल dryers उपलब्ध हुनेछ। यो कोठा टीवी र रेफ्रिजरेटर मा उपस्थिति, साथै ठूलो बेड ध्यान दिनुहोस् छैन असंभव छ।
टिप्पणी र थप जानकारी
पहिले नै होटल उचित मूल्य छ जो Volsk शहर, भ्रमण गर्ने पर्यटक टिप्पणी, कि होटल "अलेक्जेन्ड्रिया" साँच्चै आधुनिक संकेत गर्छ। पर्यटक कम्प्लेक्स कर्मचारी दिन वा रात को कुनै पनि समयमा आफ्नो ग्राहकहरु मद्दत गर्न तयार छ।
धेरै संस्थाले कम्युनिष्ट (15 औं घर, को 1st भवन) को बाहिर स्थित, र (3 हजार। Rubles) डिलक्स गर्न अर्थव्यवस्था देखि आवास भाडामा शहर आगन्तुकहरूलाई प्रदान गर्दछ (400 दल्नु।) छ। परियोजना प्रशासक सम्पर्क गर्नुहोस्, कल गर्न सक्छन् +7 (987) 822-60-03।
यो होटल पनि जहाँ यो9उपलब्ध कोठा मध्ये रहन सम्भव छ एक मिनी-पाहुना, छ। यो स्थान को मुख्य लाभ पशुहरू संग आवास यहाँ को संभावना छ। पनि टिप्पण लायक होटल एक पल्ट हो, र आफ्नै कार मा आइपुगेको छ जो ग्राहकहरु को लागि, त्यहाँ उपलब्ध निःशुल्क पार्किङ क्षेत्र पार्किंग छ भन्ने छ।
प्रत्येक कोठा आधुनिक समतल स्क्रीन टीवी छ, र केही अवस्थामा ठूलो undeveloped मनोरञ्जन क्षेत्र। साथै, पनि होटल जटिल मा एउटा सानो स्मारिका पसल, जहाँ सबैलाई आफ्नो परिवार र साथीहरूको उपहार खरिद गर्न मौका छ संचालित।
महत्त्वपूर्ण जानकारी र समीक्षा
तपाईं Volsk शहर मा आइपुग्दा योजना भने, यो स्तर को होटल तपाईंले भ्रमण गर्न निश्चित, lodgers द्वारा पेश समीक्षा, आधुनिक भित्री, उत्कृष्ट सेवा र अनुकूल कर्मचारी हो भनेर जानकारी पुष्टि किनभने हुनुपर्छ। पनि आगंतुकों यो संस्थाले को स्वीकार्य मूल्य निर्धारण नीति मनाउन। यस मामला मा, तपाईं एक सुइट, एकल ओछ्यानमा वा एक मानक डबल कोठा संग एक डबल स्टूडियो भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रति दिन आवास को लागत 1800 3,500 rubles देखि फरक हुन्छ।
यो संस्थाले Bolshevik (19 घर) को गाउँमा छ, र परियोजना सम्बन्धित फोन नम्बर मा प्रतिनिधि हुन सक्छ: +7 (906) 316-24-74।
जब पर्यटकहरु शहर को केहि प्रकार (जस्तै, Volsk) आउन, होटल, मूल्यहरु जो सबैभन्दा, उपयुक्त उहाँले पहिलो स्थानमा खोज्दैछ। यस मामला मा, एक आदर्श विकल्प एक "Ivanhoe" (सेन्ट। Talalikhina, 71) राख्दै छ। यहाँ तपाईं पनि आफ्नो पाल्तु जनावर संग रहन सक्छ।
साथै, यो पर्यटक जटिल को क्षेत्र मा स्थायी रूपमा बार र एक गेंदबाजी एली कार्य कि टिप्पण लायक छ। तपाईं आफ्नो कार मा आइपुग्दा योजना भने, त्यहाँ एक निःशुल्क निजी पार्किंग क्षेत्र हो भनेर सजग हुनुहोस्।
प्रत्येक कोठा मा एक टीवी, एक केतली र वातानुकूलन र एक निजी बाथरूम छ। खैर, होटल प्रशासन मा रहन समयमा तपाईं व्यक्तिगत स्वच्छता प्रसाधन लागि सहज स्नानवस्त्र र आवश्यक संग प्रदान गर्नेछ। "Ivanhoe" को क्षेत्र मा उपलब्ध ठूलो वायरलेस इन्टरनेट छ।
समीक्षा सेवाको राम्रो स्तर संकेत गर्छ। दर अलिकति अन्य पहिले वर्णन होटल (2300 RUB। 4100. गर्न RUB) मा भन्दा उच्च, तर यो न्योचित छ।
यहाँ हामी सबै भन्दा राम्रो होटल रहन योजना गर्नेहरूका लागि एक यात्रा लायक छ जो Wolska, छलफल!
Sharm प्लाजा पूर्व Crowne Plaza Resort - वास्तविकता मा एक परी कथा
होटल ओम्स्क (समीक्षा)
होटल Condor सनी बीच3* (बुल्गारिया, सनी बीच): विवरण, सेवा,
होटल सर्वश्रेष्ठ पश्चिमी कूटा Villa4* (इन्डोनेशिया, बाली): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
क्यालिफोर्निया बगैचा3- Salou मा अवकाश
को वोल्गा मा छुट्टी घर। को वोल्गा मा पेन्सन: बच्चाहरु संग छुट्टी
को नर्सरी लागि पर्दे कसरी चयन गर्न
ऊन फ्रान्सेली छलछामको गाँठो - मूल कुराहरू कौशल
डेजी बगैचा धेरै वर्ष - शुद्धता र रूस को एक प्रतीक
"संचालन: नयाँ जीवन।" यस श्रृंखला को विवरण। छोटो फिल्म sodezhranie
शारीरिक निर्वात: दार्शनिक दृष्टिकोण र विज्ञान को सुविधाहरू
क्रेप साटन: विवरण र Tissues को गुण
Ol'ginka: ब्याज र मनोरञ्जन को ठाउँमा। वयस्क र बच्चाहरु को लागि Ol'ginka
चाखलाग्दो कुरा, जबकि भियतनाम केही समुद्र?
बास्केटबल खेलाडी इयुङ प्याट्रिक: जीवनी, उपलब्धिहरू
गिरावट मा रोपण chrysanthemums: सुझाव व्यवसायीक
छवि प्रशोधन: आधारभूत विधिहरू
Gaba चिया: गुणहरू, स्वाद, सल्लाह लागि तानाबाना बिकसित हुँदैछ